Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Airbus dia manangana serivisy fanofanana mpanamory fiaramanidina mifototra amin'ny rahona
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Mobile Airbus Training Experience Suite dia sehatra serivisy mifototra amin'ny famandrihana miaraka amin'ny tontolon'ny cockpit virtoaly 3D interactive ho an'ny pilotan'ny Type Form.
Airbus dia namolavola MATe miaraka amina portability sy mifanentana ao an-tsaina.
Mate Suite dia azo ampiasaina ho fonosana mahazatra miaraka amin'ireo modely sy serivisy tsy voatery atao izay azo amboarina mifanaraka amin'ny filàn'ny kaompaniam-pitaterana.
Afaka mampiasa ny serivisy ny mpanamory fiaramanidina mba hampiofanana isaky ny aiza sy amin'izay toerana tiany.
Airbus dia nanangana ny Mobile Airbus Training Experience (MATe) Suite, sehatra serivisy mifototra amin'ny famandrihana miaraka amin'ny tontolo 3D ho an'ny kokpit virtoaly ho an'ny mpanamory fiaramanidina miverina sy voalohany.
Airbus namolavola MATe misy portability sy mifanentana ao an-tsaina. Miorina amin'ny fahombiazan'ny Airbus Cockpit Experience (ACE) Trainer, simulator virtoaly virtoaly sy interactive ampiasaina amin'ny foibe fiofanana Airbus ho an'ny taranja Fahazoan-dàlana ho an'ny Flight Crew, ny vahaolana MATe dia ahafahana mampiasa karazana fitaovana IT. Afaka mampiasa izany serivisy izany ny mpanamory fiaramanidina mba hampiofanana isaky ny misy na aiza na aiza no tadiaviny, miaraka amin'ireo mpampiofana afaka manara-maso sy manaraka ny fivoarany amin'ny alàlan'ny haitao cloud farany.
Azo alaina ho an'ny Family A320 ankehitriny, ny filozofian'ny MATe tompondakan'i Airbus "mifototra amin'ny fahaiza-manao" filozofia sy ny fenitry ny Flight Training Reference (AFTR). Ny vahaolana, izay manome tombony maro; fitazonana fahalalana tsara kokoa sy fitehirizana fotoana lehibe amin'ny fitaovana fanofanana ambaratonga ambony sy simulator, dia noraisin'ireo kaompaniam-pitaterana, miaraka amin'ireo fifanarahana efa nosoniavin'ny mpanjifa maro; any Eropa - Air Malta - ary ny kaompaniam-pitaterana mpandeha lehibe indrindra any India -IndiGo.
Mate Suite dia azo ampiasaina ho fonosana mahazatra miaraka amin'ireo modely sy serivisy tsy voatery atao izay azo amboarina mifanaraka amin'ny filàn'ny kaompaniam-pitaterana. Ny vahaolana dia ho hita ho an'ny A330 sy A350 amin'ny fiandohan'ny 2022.